Somaliya | Mimmi
Turun Tyttöjen Talo® (Guriga Gabdhaha ee Turku) waa goob ay ku kulmaan dhamaan gabdhaha iyo dumarka da’da yar ee jira inta u dhaxeysa 12 ilaa 28.
Gurigan waxaad kula kulmi kartaa dad kale, waxaad ku tababarankartaa ku hadalka afka Finishka, waxaad isticmaali kartaa kumbuuterka, waxaad kaloo heli kartaa kaalmo kuu gaar ah oo lagaa siiyo arimaha ladnaantaada, ka shaqeynta layliga iyo arimo kale oo joogta ah.
Waxaad sameyntakartaa waxyaabaha sida farsamada gacanta, waxaad ciyaari kartaa games, waxaadna wax la karinaysaa kuwa kale.
Waxaad sidoo kale ka qeyb qaadan kartaa hiwaayado kala duwan iyo kooxo dood-wadaag ah iyo dhacdooyin kale. Sidoo kale waxaad ka heli kartaa cunto-fudud.
Waxaa wax-qabadyada gurigan lagu qorsheeyay rabitaanka gabdhaha iyo dumarka da’da yar.
Gurigan amaanka iyo hoyga gabdhaha ah waxuu ku yaalaa bartamaha Turku. Shaqaalaha oo dhan waa dumar. Waxaad ku soo dhawaataa balan aad la yeelato gurigan adiga iyo qoyskaaga. Wax-qabadyadu waa lacag la’aan.
Waxaan xiiseynaynaa la kulankaaga.
Yliopistonkatu 26 B, 2nd fl.
Turun Tyttöjen Talo® (Guriga Gabdhaha ee Turku) waa goob ay ku kulmaan dhamaan gabdhaha iyo dumarka da’da yar ee jira inta u dhaxeysa 10 ilaa 16.
Gurigan amaanka iyo hoyga gabdhaha ah waxuu ku yaalaa Varissuo. Shaqaalaha oo dhan waa dumar. Waxaad ku soo dhawaataa balan aad la yeelato gurigan adiga iyo qoyskaaga. Wax-qabadyadu waa lacag la’aan.
Waxqabadka Dhalinyarada Guryaha Loogu Qabto
Ayaa waxaa xaafada Varisuo laga bilaabay sanadka 2017 waxqabadkaas oo loogu talogalay gabdhaha ajanebiga ah oo dhigta galaasyada udhexeeya 5-9 kuwaas oo ku qaadta waqtigooda fasaxa badanaa guriga ama aan heysan wax ey qabtaan waqtiga iskuulka kedib. Muhiimada mashruucan ama shaqadan wexeey tahay in la la sameeyo xiriir wanaagsan oo ku dhisan kalsooni iyo furfuraan waalidiinta iyo gabdhahaba. Kulanka ugu horeeya wuxuu ka dhacaayaa guriga gabadha dhalinyarada ahi degan tahay si loogu sameeyo gabar kasta qorsho ku saleeysan baahideeda caawimaad iyo saaxiibadeed ama waxay jeclaan lahayd in ey sameyso iwm. Kulamadaan badankood waxyaabaha la sameeyo iyo waxyaabha laga qabto guriga gabdhaha waa isku mid sida.in laga caawiyo shaqada iskoolka, in wax lala dubo, in waxyaabaha farshaxanka la sameeyo ama in aan isla raadino/qorsheyno waxan isla samey lahayn. Muhiimadu wexeey tahay in lagu guubaabiyo ama garab lagu siiyo gabadha in ey ayadu iskeed wax sameeyso oo eyna ka qeeyb qaadato waxyaabaha gabdhaha dhalinyarada loogu talo galay agtifatiga midaas oo gabadha ka caawineeysa si guud ahaan koriimada iyo kalsoonida ey nafteeda ku qabto. Waxqabadka dhalinyarada ee guriga loogu geeyo waxaay fududeeynaysaa/ama horumar u tahay shaqada ey qabadto xarunta/guriga gabdhaha.